फ्रि भिषामा विदेश जानु हुन्छ की हुन्न ?
प्रश्नः मेरो नाम कृष्णकुमार पराजुली हो । म विदेश जान लाग्दैछु । मलाई फ्रि भिषामा पठाइदिने भनिएको छ । त्यस्तो भीसामा विदेश जानु हुन्छ की हुन्न ? उत्तरः अहिले कतारले भिषा, टिकट फ्रि भनेर पठाइरहेको छ । त्यसैले तपाई कतार जान लाग्नु भएको हो भनें यसमा कुनै समस्या हुन्न । (बद्रीकुमार कार्की, प्रवक्ता बैदेशिक रोजगार विभाग)
आँखा कमजोर भएकाले बिदेश जान पाउँछन् ?
प्रश्नः मेरो नाम दिलविक्रम अधिकारी हो र म अहिले काठमाडौंमा बस्छु । म सेक्युरिटी गार्डका रुपमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहन्छु । मेरो आँखा केहि कमजोर छ । म विदेश जान सक्छु कि सक्दिन होला ? उत्तरः तपाईको आँखा कति कमजोर छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएन । तपाईको आँखा कति कमजोर हो ? धेरै नै कमजोर छ भनें जान सकिन्न । तर सामान्य दृष्टि क्षमता कमजोर हुने वित्तिकै जान नपाइने भन्ने हुन्न । अहिले पनि कतिपय व्यक्ति चस्
सेक्युरिटी गार्डका लागि दुई लाख चाहिन्छ ?
प्रश्नः मेरो नाम प्रभात कार्की हो । म बाँकेको नौवस्तामा बस्छु । म सेक्युरिटी गार्डका लागि मलेसिया जाने विचारमा छु । एजेण्टले मसँग दुई लाख रुपैंया मागेको छ । के त्यहाँ जान दुई लाख रुपैंयाँ तिर्नु पर्छ र ? उत्तरः प्रभात जी, मलेसिया जान लिन पाउने अधिकतम रकम भनेको ८० हजार हो । त्यो भन्दा बढी कसैले मागेको खण्डमा तपाईले यसका विरुद्धमा बैदेशिक रोजगार विभाग वा तपाईको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी हाल्न